Fahalotoan'ny tany: antony sy vokany | Green Renewable
Tomas Bigorda | | Fambolena ekolojika, tontolo iainana
La fahalotoan'ny tany na ny fanovana ny kalitaon'ny tany dia noho ny antony samihafa ary ny vokany mazàna dia miteraka olana lehibe izay misy fiatraikany amin'ny zavamaniry, ny biby na ny fahasalaman'ny olombelona mandritra ny fotoana maharitra.
Amin'ny alàlan'ny fambolena dia iray amin'ny fomba iray izay tsy voalanjalanja ny tontolo iainana, mandoto rano fisotro na rano manondraka, midika izany fa tsy ho voavaha hatrany io olana io ary indraindray ampahany amin'ny fahavoazana ihany no azo alaina ao anaty faritra. Fa,inona no mahatonga ny loto amin'ny tany? ary ahoana no hamahana azy?
1 Antony fandotoana ny tany
1.1 Fanariam-pako any Espana
1.2 Raraka ny ercros ao Flix
1.3 Lisitra lava
2 Karazana fako
3 Vokatry ny fahalotoan'ny tany
3.1 Chernobyl 30 taona aty aoriana
4 Vahaolana amin'ny fahalotoan'ny tany
4.1 Manana tambajotram-pitateram-bahoaka tsara
4.2 Mampiasa fiara elektrika
4.3 Aza atao mihazakazaka loatra ny fiaranao rehefa mijanona
4.4 Tazomy amin'ny toerana tsara ny fiaranao
4.5 Manampy amin'ny fisorohana ny ala
4.6 Misafidiana bebe kokoa amin'ny vokatra biolojika.
4.7 Kitapo plastika
4.8 Fanasokajiana ny fako
Antony fandotoana ny tany
Ny antony mahatonga ny fahalotoan'ny tany dia samy hafa, ohatra akora misy poizina ao ambanin'ny tany izay miafara amin'ny fandotoana ny rano ambanin'ny tany izay hampiasaina hanondrahana, hisotroana na hiafarany manapoizina antsika amin'ny alàlan'ny rojom-pisakafoanana. Dingana iray izay mahavita mandoto tsy nahy ny tenantsika sy ny zava-drehetra manodidina antsika, ary ny olana lehibe indrindra dia ny handraisan'ny taranaka vitsivitsy ny fanasitranana izay nataontsika tamin'ity fikasana hamokatra be ity nefa tsy nieritreritra izay ho avy any aoriana. .
Ny fifandraisana amin'ny faritra maloto dia tsy mivantana foana. Izany no mitranga rehefa alevina izy ireo poizina poizina ambanin'ny tany ary ireo dia miafara amin'ny fandotoana ny rano ambanin'ny tany izay ampiasaina hanondrahana, hisotroana na hiafarany manapoizina antsika amin'ny alàlan'ny rojo sakafo, amin'ny fihinanana trondro, akoho amam-borona na biby voaloto rehetra.
Ny fitahirizana fako diso, ny fanariana azy fanahy iniana na tsy nahy (toy ny orinasa Ercros ao Flix), ny fanangonana fako amboniny na ny fandevenana an'io (fanariam-pako maro any Espana), ary koa ny fivoahan'ny tanky na ny tahirim-bola noho ny fahasimbana, ny fotodrafitrasa mahantra no tena antony iray lehibe.
Ary, tsy mijanona eto fotsiny izahay hatrizay ny lisitra dia mihalehibe amin'ny olana "madinidinika" toy ny famoahana radioaktifa, fampiasana mahery vaika ny fanafody famonoana bibikely, ny harena ankibon'ny tany, ny indostrian'ny simika na ireo fitaovana fananganana izay ampiasaina ankehitriny nefa tsy fantatsika ny fiantraikan'izy ireo.
Fanariam-pako any Espana
Ny fiheverana kely omen'i Espana amin'ny fanodinana sy fikolokoloana ny tontolo iainana dia loharanom-kenatra ankehitriny eo amin'ny Vondrona Eropeana, saingy mandrahona ny ho lasa loharanom-bola sazy an-tapitrisany amin'ny taona manaraka. Manana drafitra fanodinana fatratra i Bruxelles: amin'ny taona 2020, ny firenena mpikambana ao aminy rehetra dia tsy maintsy mamerina ny 50% ny fako, ary efa hanaiky ny 70% ny vaomiera amin'ny 2030. Saingy, sarotra ny mamerina izao i Espana 33% ny fakonao ary ny fandrosoana dia kely. Na ny fanantenana be fanantenana indrindra aza dia hahavita ny adidiny ao anatin'ny telo taona ny firenentsika.
Ny antso fanairana voalohany dia efa tonga tamin'ny endrika didim-pitsarana avo roa heny tao amin'ny Fitsaran'ny Fitsarana ao amin'ny Vondrona Eropeana (CJEU), izay manameloka an'i Espana noho ny fisian'izany sy fandaozana tanteraka ny Fanariam-pako tsy voafehy 88. Ny voalohany dia navoaka tamin'ny volana febroary 2016 ary namantatra ny fanariam-pako 27 izay mbola navitrika na tsy nasiana tombo-kase taorian'ny fanidiana. Ny faharoa dia tonga vao andro vitsivitsy lasa izay ary nametraka ny rantsan-tanany tao amin'ny fanariam-pako 61 hafa, 80% amin'izy ireo no zaraina eo anelanelan'ny Nosy Canary sy Castilla y León.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana isan-karazany dia baomba mandiso fotoana maharitra ny fanotofana tany. Rehefa nakatona dia tsy maintsy fehezin'ny tontolo iainana mandritra ny 30 taona, fanaraha-maso ny famoahana ny rano ambanin'ny tany sy ny atmosfera, satria tsy ajanona amin'ny famehezana ny lavaka ny fizotry ny fandringanana.
Fonenana ara-dalàna maro no rakotry ny sosona polyethylene telo-milimetatra, misy sakana tanimanga amin'ny tranga tsara indrindra, saingy matetika no tototry ny hetsiky ny gazy sy ny tany izy ireo. «Loza ho an'ny fahasalamam-bahoaka izy ireo. Ny fitantanan-draharaha dia miafina ao ambadiky ny zava-misy fa maro no tsy misy fako inert, fa mitandrema tsara amin'ireo fitaovana fandravana sy fananganana, toy ny asbestos na pipa firaka, izay naseho izy ireo dia voan'ny kanseran'ny homamiadana»
Raraka ny ercros ao Flix
Ny fitehirizan-drano Flix, any amin'ny faritany Catalan any Tarragona, dia nanatri-maso maherin'ny zato taonan'ny fandrobana sy fandotoana tany amin'ny akora simika maharitra, biolojika ary poizina avy amin'ny ozinina simika an'ny orinasa Ercros. Niteraka fandotoana izany renirano Ebro ankapobeny, manomboka amin'io fotoana io ka hatramin'ny vava.
Anisan'izany ny loto metaly mavesatra toy ny merkurioma sy cadmium, na fitambarana organochlorine misy poizina sy maharitra toy ny hexachlorobenzene, biphenyls polychlorined (PCBs) na DDT sy ny metabolites.
“Ercros, izay noheverina ho toerana simika maloto indrindra amin'ny reniranon'i Ebro, dia niady nandritra ny taona maro mba tsy handoavana ny fanadiovana ny renirano, izay loharano fisotroana manandanja kosa. Ny orinasa Ercros dia miorina eo akaikin'ny tanànan'i Flix, izay manome ny anarany ny fitahirizana traboina vokatry ny fandotoan'ny Ercros SA, Erkimia taloha, izay anaovany sy amidiny vokatra fototra ho an'ny indostrian'ny simika sy ny fanafody.
Mampalahelo fa lava kokoa ny lisitra, saika tsy manam-petra. Afaka mitanisa antony maro hafa manan-danja ihany koa isika, toy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany (fitaovana toy ny mercury, cadmium, varahina, arsenika, firaka), indostrian'ny simika, famoahana radioaktifa, fampiasana pesticides mahery, fandotoana avy amin'ny motera may, setroka avy amin'ny indostria, akora fananganana, mandrehitra lasantsy fosily (arina, solika ary gazy), tatatra taloha tsy salama tsara amin'ny hafa.
Hitantsika fa misy loharanom-pahalotoan-tany maro be, antony miteraka imbetsaka sarotra ny mahita azy ireo, satria ny loto dia mety hahatratra ny zavamaniry na biby na handoto rano amin'ny fomba maro samihafa, fa tsy matetika tsinontsinona izy ireo.
Amin'ny zava-misy henjana dia hoe be dia be ny antony, izay amin'ny teny ankapobeny, dia miteraka fikorontanana amin'ny fiezahana hahalala hoe iza izy ireo, satria asa sarotra izany. Toy ny hoe nisy tafo 20 tao an-tranonay ary tsy hitanay hoe aiza izy ireo ary ahoana no hamongorana na hanamboarana azy ireo. Ny olana fa tsy tranontsika eto, fa ny planetantsika manokana no atahorana
Iray amin'ireo olana lehibe dia hoe be dia be ny antony, izay amin'ny teny ankapobeny, dia miteraka fikorontanana amin'ny fiezahana hahalala hoe iza izy ireo, satria asa sarotra izany. Toy ny hoe nisy tafo 20 tao an-tranonay ary tsy hitanay hoe aiza izy ireo ary ahoana no hamongorana na hanamboarana azy ireo. Ny olana fa tsy tranontsika eto, fa ny planetantsika manokana no atahorana.
Vokatra mampidi-doza: Misy poizina be ny vokatra fanadiovana, loko, fanafody ary bateria. Ireo vokatra ireo dia mila fampielezana fanangonana manokana izay tsy miafara amin'ny fanariam-pako tsy voafehy izay mety hiteraka korontana amin'ny tontolo iainana amin'ny fandotoana ny rano sy ny tany.
Ny stack dia iray amin'ireo vokatra poizina mampidi-doza indrindra noho ny atiny merkiora sy cadmium. Rehefa lany ny bateria ary miangona ao anaty fanariam-pako na may, dia avela handositra ny rakotra, ary hidina ao anaty rano na ho ela na ho haingana. Ny Mercury dia tototry ny plankton sy ny ahidrano, avy amin'ireo ka hatramin'ny trondro ary avy amin'ireo mankany amin'ny olona. Ny sela bokotra dia mety handoto 600.000 litatra. ny rano. Ny fanafody dia misy singa misy poizina izay afaka miditra ao anaty fanariam-pako ary miditra ao anaty rano, mandoto azy io.
Domiciliary: fako avy any an-trano sy / na vondrom-piarahamonina.
Industrial: ny niandohany dia ny vokatry ny fanodinana na ny fanovana ny akora fototra.
Tia Mandray Vahiny: fako izay sokajiana ho fako mampidi-doza amin'ny ankapobeny ary mety ho voajanahary sy tsy anana.
ara-barotra: avy amin'ny foara, birao, fivarotana sns, ary voajanahary ny firafiny, toy ny sisan'ny voankazo, legioma, baoritra, taratasy sns.
Fako tanàna: mifanentana amin'ny mponina, toy ny zaridaina sy zaridaina, fanaka an-tanàn-dehibe tsy misy ilaina sns.
Junk space: satelita sy zavakanto hafa niavian'ny zanak'olombelona izay, na dia eto amin'ny Earth orbit, dia efa nandany ny fiainany mahasoa.
Olana lehibe eo amin'ny tontolo iainana ny fako plastika ao anaty ranomasina
Vokatry ny fahalotoan'ny tany
La fahalotoan'ny tany dia maneho andiam-vokadroa sy vokatra manimba na ho an'ny olombelona, ​​na ho an'ny zavamaniry sy biby amin'ny ankapobeny. Ny karazany isan-karazany ny fiantraikan'ny poizina dia miankina betsaka amin'ny zavatra manokana izay nanimba ny fahasalaman'ny tany.
Ny voalohany vokatr'izany Misy fiantraikany amin'ny zavamaniry io fandotoana io, simba ny zavamaniry ary mihena be ny karazan-javamananaina, ireo izay mbola miaina kosa dia hisy endrika malemy ary ho sarotra ny fizotrany voajanahary.
Ny fahalotoan'ny tany dia manakana ny fivelaran'ny fiainana bibyRaha tsy misy sakafo na rano madio dia mifindra monina ny karazam-biby na iharan'ny fahasimbana tsy azo sitranina amin'ny rojom-pananahana. Amin'ity dingana ity dia izay antsoina hoe "fahasimban'ny tontolo iainana" ary noho izany dia "fatiantoka eo amin'ny sandan'ny tany”, Mijanona ny hetsika fambolena, manjavona ny biby ary tsy misy ilana azy ny tany.
Ny fahaverezan'ny kalitaon'ny tany dia misy vokadratsiny ratsy eo aminy fihenam-bidy, araka ny efa nolazainay, na ny tsy fahafahan'ny fampiasana aza manangana, mamboly na, amin'ny fomba tsotra sy tsotra, hampiorenana tontolo iainana sy tontolo iainana.
Ny vokany dia azo zakaina mangina ka miteraka a tsy mitsahatra ny mitanjozotra amin'ireo niharam-boina, na karazan'olona na biby ary zavamaniry.
Ohatra iray mazava ny toby nokleary Chernobyl, na ny vao haingana indrindra famoahana radioaktifa avy amin'ilay orinasa Japoney de Fukushima, satria nisy fiantraikany tamin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny fahalotoan'ny tany. Izy io aza efa hita fako radioaktifa amorontsiraka avy any Fukushima, manokana amin'ny fanambanin'ny tany avy amin'ireny haondrana ireny ihany, araka ny fanadihadiana isan-karazany nataon'ny Institute of Industrial Science ao amin'ny Oniversiten'i Tokyo, ny University of Kanazawa ary ny National Research Institute.
Etsy ankilany, miaraka amin'ny fiharatsian'ny lozika amin'ny tontolo iainana noho ny fahantrana ny tontolo iainana, matetika fatiantoka iray tsy azo ovaina, ny fahalotoan'ny tany dia midika Mpanapitrisa very amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fitrandrahana ity tontolo voajanahary ity ataon'ny mponina indizena na mpampiasa vola indostrialy.
Chernobyl 30 taona aty aoriana
Tao anatin'ny 30 taona taorian'ny nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana nokleary tany Chernobyl, nianjera ny kominisma, rava ny Firaisana Sovietika, ary nisy aza revolisiona roa ary ady mbola miafina sy tsy vita any Ukraine.
Raha ny amin'ny fotoana ara-tantara dia toa nivadika mihoatra ny ilaina izao tontolo izao nanomboka tamin'io maraina mampivadi-po io, izay nitifiran'ny teknisianina iray ny reaktera laharana faha-efatra an'ny toby famokarana herinaratra Vladimir Lenin, na eo aza ny fanaovana fitsapana izay heverina fa hanamafisana ny filaminany.
Fa ho an'ny tontolo iainana - ny rivotra, ny rano, ny tany miampy izay rehetra niaina ary honina ao - dia toy ny tsy nihetsika ara-bakiteny ny tanan'ny famantaranandro. ny Mandoto taona an'arivony maro ny fahalotoan'ny tany radioaktifa. Ka tsy misy dikany ny telopolo taona raha resaka loza nokleary ratsy indrindra eto an-tany.
Chernobyl dia mbola eo amin'ny voankazo sy holatra amin'ny ala, amin'ny vokatra ronono sy ronono, hena sy trondro, ary varimbazaha. Ary amin'ny kitay izay ampiasaina handrehitra afo sy ao anaty lavenona sisa tavela aorian'izay. Raha atao teny hafa, amin'ny fahasalaman'ny olona rehetra. Ny zavatra tompon'andraikitra - na dia anio aza - dia handeha hiantsena amin'ny Kaontera Geiger, ireo masinina kely izay mitabataba rehefa manakaiky ny radioactivity izy ireo, hahafantarana raha manana ny ambaratonga ilaina amin'ny fiarovana ireo vokatra izay ho entinao eo amin'ny latabatrao mihinana.
Vahaolana amin'ny fahalotoan'ny tany
Ny fisorohana dia ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny rehetra, ampianaro ny zandriny indrindra handray anjara. Manomboka amin'ny fanariana ny fako amin'ny toerany ka hatramin'ny fandraisana anjara amin'ny fanadiovana ao amin'ny fiarahamonina.
Fa marina ihany koa fa tsy afaka misoroka ny fahalotoan'ny tany hatrany ianao (sy tsy te-hanaraka). Indraindray misy lozam-pifamoivoizana, ka sarotra ny mifehy, rehefa tsy azo atao.
Raha mankany amin'ny fototry ny olana isika, a fiovana mahery vaika amin'ny maodely famokarana na fandraràna fomba fanao sasany ho toy ny asan'ny indostria sasany mamokatra fako misy poizina, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny fampiasana zezika artifisialy miorina amin'ny menaka.
Mampalahelo fa nofinofy ireo safidy ireo. Noho izany, manoloana ny fait accompli dia tadiavina ny vahaolana izay manomboka amin'ny fanadiovana ny faritra ka hatramin'ny famerana ny faritra simba sy ny fandrarana ny fampiasana azy amin'ny hetsika sasany. Amin'ny tranga henjana, toy ny Fukushima na Chernobyl, ireo faritra voakasik'izany dia tsy mety amin'ny ain'olombelona.
Ary, satria nitombo ny fahalotoana tato anatin'ny folo taona lasa vokatry ny fampiroboroboana ny indostrialy sy ny fampandrosoana ny tanàna, ny vahaolana dia avy amin'ny fifehezana ireo loharano ireo. Mahazatra, ny hetsika dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny zavamaniry fanodinana mba hampihenana ny fandotoan'ny tany sy, miaraka amin'izay, ny rano, satria mandoto azy io.
Ny bioremediation amin'ny tany dia paikady mitady hamerina amin'ny laoniny ny tontolo iainana simika mampiasa zava-manan'aina, toy ny bakteria, zavamaniry, holatra ... Miankina amin'ny karazana fandotoana tadiavinao hiadiana dia hampiasaina ny mpiasa iray na iray hafa bioremediator. Ny fampiharana azy dia malalaka, miaraka amin'ny valiny mahaliana amin'ny tany voaloton'ny radioactivity na, ohatra, amin'ny asa fitrandrahana.
Amin'ny maha fanao tsara azy, fanodinana fako fako sy fako sahaza, ny fampiharana ny angovo azo havaozina, ny fitsaboana ny fako indostrialy sy anatiny na ny fampiroboroboana ny fambolena ekolojika dia hanampy amin'ny fitazonana ny tany tsy ho voaloto. Tazomy amin'ny laoniny tsara ny tamba-jotra maloto ary manatsara ny fitsaboana rano maloto, ary koa ny fitsaboana ny fitrandrahana indostrialy izay miverina amin'ny natiora.
Vahaolana hafa azo dinihina dia:
Manana tambajotram-pitateram-bahoaka tsara
Mampiasa fiara ny olona tsy ho fanamorana fotsiny, fa noho ny fahasarotan'ny fitateram-bahoaka amin'ny tanàna maro. Raha mampiasa vola amin'ny fitateram-bahoaka mahomby kokoa ny governemanta dia tsy ho sahy hampiasa azy io ny olona
Mampiasa fiara elektrika
Ny fiara mandeha herinaratra dia efa nanjary fahita any an-tanàn-dehibe ary, noho ny herin'ny herinaratra irery ihany, dia tsy mamoaka karazana emission any amin'ny tontolo iainana izy ireo. Raha ny fahaleovan-tena taloha no olanaAndroany, maharitra kokoa ny baterin'ny fiara elektrika, ary azo atao ny mahita gara miasa amin'ny faritra samihafa amin'ny tanàna.
Aza atao mihazakazaka loatra ny fiaranao rehefa mijanona
Fepetra azonao raisina izao. Aza mijanona mihazakazaka mihazakazaka amin'ny fiaranao, satria amin'izany fotoana izany dia mampiasa solika betsaka ny fiara, miaraka amin'ny fandefasana azy tsirairay avy
Tazomy amin'ny toerana tsara ny fiaranao
Fiara tsy mandeha amin'ny lalana no mazàna mandoto bebe kokoa. Raha manatanteraka ny fikojakojana mifanaraka amin'ny fiara ianao, dia azonao antoka fa tsy hisorohana ny olana amin'ny fandidiana ihany, fa hampihena ny famoahana entona ihany koa.
Manampy amin'ny fisorohana ny ala
Mba hisorohana ny fandotoan'ny tany dia tsy maintsy tanterahina haingana ny fanapahana ny ala. Mamboly hazo. Ny fikaohon-tany dia vokatry ny tsy fisian'ny hazo hisorohana ny sosona ambony amin'ny tany tsy hoentin'ny mpiasan'ny natiora isan-karazany, toy ny rano sy ny rivotra.
Misafidiana bebe kokoa amin'ny vokatra biolojika.
Tsy misy isalasalana fa lafo ny vokatra biolojika raha oharina amin'ny simika. Fa ny safidy ny vokatra biolojika dia hampirisika a famokarana biolojika bebe kokoa. Hanampy anao amin'ny fisorohana ny fahalotoan'ny tany izany.
Mampiasà kitapo lamba. Aza mihinana kitapo plastika satria elaela vao mihahaka. Soa ihany satria voatery nandoa ny fanjifany izy ireo dia nidina mafy.
Fanasokajiana ny fako
Tokony hanasokajiana ny fako arakaraka ny endriny:
Fako voajanahary: ny fako rehetra fiaviana biolojika, izay velona taloha na anisan'ny zavamananaina, ohatra: ravina, sampana, hodi-kazo ary residues avy amin'ny fanamboarana sakafo an-trano, sns.
Sisa tsy organika: izay fako tsy fiaviana biolojika, fiaviana indostrialy na fizotra tsy voajanahary hafa, ohatra: plastika, lamba sentetika sns.
Sisa mampidi-doza: izay fako, na fiaviana biolojika na tsia, izay mety hampidi-doza ka noho izany dia tsy maintsy tsaboina amin'ny fomba manokana, ohatra: fitaovam-pitsaboana mifindra, fako radioaktifa, asidra ary akora simika manimba sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » tontolo iainana » Fambolena ekolojika » Ny antony sy ny vokatry ny fahalotoan'ny tany
Delilah Rolon del Puerto dia hoy izy:
Tena mahaliana, fanabeazana, amiko dia toa tokony hampahafantarina ireo ivon-toerana fanabeazana ity asa ity, satria eo no tsy maintsy hikirizirentsika ny amin'ny antony sy ny vokany! Misaotra anao fa mora be ho ahy ny mahita olona hanohana ahy
asa mitohy hanentanana ny saina.
Valiny tamin'i Dalila Rolón del Puerto
Tongasoa ianao, Delilah!
emily_pro dia hoy izy:
adala ahoana 🙂
Mamaly an'i emily_pro
Ho hitantsika ny vokatry ny toby nokleary Fukushima amin'ny ho avy, ary tena ho matotra izany. Ireo rehetra noho ny tsy fanarahana ny tolo-kevitra momba ny fiarovana. Tranga iray hafa manandanja ihany koa ny fandotoana ny fiainana an-dranomasina amin'ny fiparitahan'ny solika. Lahatsoratra tsara, ilaina hanentanana ny olona.
Mamerina ny fisaorana anao! : =)
Bebe kokoa cony dia hoy izy:
Mahaliana tokoa ny fanazavanao
Mamaly bebe kokoa cony kely
Misaotra! Fiarahabana lehibe!
Omeko 1000 izy
Misaotra anao, nanampy ahy tamin'ny devoaranao ianao.
Mamaly an'i sofi
tena tsara ity tatitra ity dia tohizo mba hahitana raha samy afaka mahatsapa ny fahavoazana rehetra isika
Mamaly an'i luismi
rosyela saldana villacorta dia hoy izy:
ny antony nahatonga ny tatitra dia:
ny akora misy poizina ambanin'ny tany
fikorontanana fanahy iniana na tsy nahy
Mamaly an'i rosysela saldaña villacorta
rgqreg dia hoy izy:
Salama. fanazavana tena tsara ...
Mamaly an'i rgqreg
micha2012m dia hoy izy:
ny antony mahatonga kohaka ny biby
Valiny amin'ny micha2012m
Kodiarana maintso dia hoy izy:
Tena mahaliana ny fampianaran'izy ireo an'ity lahatsoratra mahafinaritra ity, ny famerenana amin'ny laoniny dia afaka mamonjy ny tendrombohitra, tanànantsika, renirano ary ranomasina.
Tsy maintsy apetrakao amin'ny tontolo iainantsika ny lanjan'ilay fanodinana.
Valiny amin'ny Green Wheel
Tanàna sy fanjifana angovo be manerantany